फेसबुक प्रोफाइलमा आफ्नो फोटो नराखेको भन्दै प्रेमीले प्रेमिकाको तीनवटा दाँत झारिदिए (फोटोसहित) — Hamro Sanchar
फेसबुक प्रोफाइलमा आफ्नो फोटो नराखेको भन्दै प्रेमीले प्रेमिकाको तीनवटा दाँत झारिदिए (फोटोसहित)
एजेन्सी । प्रेम भनेको के हो? माया भनेको के हो? प्रेम र मायाको उत्तरको पछाडि दौडियौँ भने शायद यसको जवाफ भेट्न सकिँदैन होला। विभिन्न युगमा विभिन्न प्रेमी र विद्वानले प्रेमको परिभाषा आ-आफ्नो तरिकाले दिएका छन्।
जति प्रेमको परिभाषा बुझ्दै गयो त्यति यो प्रेमको गहिराइले हामीलाई डुबाउँदै जान्छ। मानिसहरूले भने झैँ प्रेम निस्स्वार्थ छ भनौ भने प्रेममा स्वार्थ पनि हुने गरेको छ ।
प्रेमको विषयमा विभिन्न समाचारहरू सुन्ने गरेका छौँ । त्यस्तै एक प्रेमीले फेसबुकको प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गरेको निहुँमा आफ्नी प्रेमिकाको दाँत झारिदिएका छन् । लिभरपुलका २९ वर्षे प्रेमी एन्ड्रयू म्याकनेयरले आफ्नी प्रेमिका लोइस एसटोनको तीनवटा दाँत झारिदिएका हुन् ।
आफूमाथि आक्रमण भएको रात म्याकनेयरले आफूलाई महिलाको ‘नाइट आउट’ पार्टीमा एक्लै भएको बताएका थिए । एसटोनले भनिन्, ‘हामी पबमा गयौँ तर उनी हामीसँग बस्दा पनि बसेनन् । उनी अर्को बुथमा हामीलाई हेर्दै बसे ।’
पबपछि एसटोन म्याकनेयरलाई छोडेर आफ्नो साथीको घरमा ककटेलका लागि गइन् । उनले त्यसरात फेसबुकको प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गरेको सुतेकी थिइन् । तर भोलिपल्ट उनी निकै भयावह स्थितिमा ब्युँझिइन । म्याकनेयर उनको खुट्टामाथि उभिएर उनीमाथि चिच्याइरहेका थिए ।
अत्यधिक डराएकी उनले यसबारे पुलिसमा रिपोर्ट दर्ता गरिनन् । उनी घरेलु हिंसापछि महिलालाई दिइने आश्रयस्थल गइन् । म्याकनेयरको बारम्बारको चेतावनीपछि मात्रै उनले यसबारे पुलिसलाई जानकारी दिएकी हुन् ।